नेपाल – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२ कार्तिक २०७६, शनिबार ०८:२४ English
एनआरएनएको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक, कसले कति मत पाए ? १ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १३:१२
एनआरएनएको अध्यक्षमा कुमार पन्त विजयी, आचार्य १११ मताले पराजित
काठमाडौँ, १ कार्तिक । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को अध्यक्षमा कुमार पन्त विजयी भएका छन् । उनले प्रतिस्पर्धी कुल आचार्यलाई पराजित गर्दै संघको नवौँ विश्वसम्मेलनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । विजयी पन्तले कुल १ हजार १८१ मत पाएका छन् । उनले प्रतिस्पर्धी आचार्यलाई १११..
सर्वोच्चले सोध्यो, ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हो कि होइन ?’ ३० आश्विन २०७६, बिहीबार १६:५२
काठमाडौँ, ३० असोज । सर्वोच्च अदालतले मधेस थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानविन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने वा नमिल्नेबारे जानकारी गराउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले ३ महिनाभित्र निर्णय गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो..
एनआरएनए चुनावमा विवाद, सम्मेलन नै बहिष्कार गर्ने आचार्य समूहको चेतावनी
काठमाडौँ, ३० असोज । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को मतदानमा फर्जी मत खसेको भन्दै विवाद भएको छ । केही प्रतिनिधि र उम्मेद्वारले समेत फर्जी मत खसेको भन्दै विरोध गरेपछि विवाद सुरु भएको हो । उम्मेदवार र प्रतिनिधिहरुले नक्कली परिचयपत्रधारीले मतदान गरिएको भन्दै केही मतदान स्थलमा..
एनआरएनए निर्वाचनमा अब कागजी मतदान
काठमाडौँ, ३० असोज । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को निर्वाचनमा अब अब कागजी प्रक्रियाबाट मतदान हुने भएको छ । निर्वाचन समिति सदस्य केपी पाण्डेले प्राविधिक कारणवस कागजी प्रक्रियाबाट मतदान हुने जानकरी दिए । आज बिहान १० बजेदेखि ३ बजेसम्म मतदान हुने बताएका छन् । कागजी प्रक्रियाबाट हुने..
एनआरएनएमा पन्त भर्सेज आचार्य, कुन देशमा कति मतदाता ? २९ आश्विन २०७६, बुधबार ०९:१३
निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, २९ असोज । गैर–आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नयाँ नेतृत्वका लागि आज मतदात हुँदैछ । नवौं अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनबाट नयाँ नेतृत्वका लागि ४२ पदाधिकारी चयनमा निर्वाचन हुन लागेको हो । संघ ८० भन्दा बढी मुलुकमा फैलिएको दाबी गरिएको छ । करिब २६ सय प्रतिनिधिहरुले..
महराको बयान अस्पतालबाटै २७ आश्विन २०७६, सोमबार ११:१२
काठमाडौँ, २७ असोज । सचिवालयकै कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यहारको अभियोगमा पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको बयान अस्पतालबाटै लिईने भएको छ । महराको स्वास्थ्य अवस्था अझै खतरामुक्त नभएको र उनलाई अस्पतालले डिस्चार्ज गर्न नमिल्ने बताएपछि अस्पताल मै बयानको तयारी गरिएको हो..
नेपाल र चीनबीच १७ सम्झौता २६ आश्विन २०७६, आईतवार १२:४०
काठमाडौँ, २६ असोज । नेपाल र चीनबीच १७ वटा विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आ–आफ्नो टोलीको नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तापछि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतामा रसुवागढी–काठमाडौं र..
नेपाल र चीनबीच औपचारिक वार्ता सुरु, को को छन् सहभागी ?
काठमाडौँ, २६ असोज । नेपाल र चीनबीच प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय औपचारिक वार्ता सुरु भएको छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आ–आफ्नो मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको वार्तामा अर्थ, परराष्ट्र, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, संस्कृति..
काठमाडौ–केरूङ सुरूङ मार्ग बनाइदिन चीन तयार
काठमाडौँ, २६ असोज । चीनले सीमा नाका केरूङसम्म जोड्न ३० किलोमिटर लामो सुरूङ मार्ग बनाइदिने भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला अन्य सहमतिसंगै सुरुङ मार्गको पनि घोषणा हुने जनाइएको छ । दुई खण्डमा बन्ने सुरुङ मार्ग कहाँबाट सुरू गर्ने भन्ने विषय विस्तृत..
चिनियाँ राष्ट्रिपतिको नेपाल भ्रमणः ५ घण्टा विमानस्थल बन्द, ८७ उडान प्रभावित (सूचीसहित) २५ आश्विन २०७६, शनिबार ०९:३१
निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, २५ असोज । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ आज नेपाल आउँदै छन् । उनी आउने र जाने समयमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बन्द हुने भएको छ । विमानस्थलमा उडान तथा अवतरण बन्द हुँदा विभिन्न कम्पनीका उडान प्रभावित हुने भएका छन् । भीभीआईपी सवारीको अवधिमा आज शनिबार र..
सीलाई स्वागत गर्न राष्ट्रपति भण्डारी विमानस्थलमै जाने २४ आश्विन २०७६, शुक्रबार १३:४५
काठमाडौँ, २४ असोज । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङलाई स्वागत गर्न राष्ट्रपति विद्या भण्डारी विमानस्थलमै पुग्ने भएकी छन् । चीनबाट २३ वर्षपछि राष्ट्रपति स्तरको भ्रमण हुन लागेको भन्दै यसलाई ऐतिहासिक बनाउन राष्ट्रपति स्वयम् विमानस्थलमा स्वागतका लागि जाने भएकी हुन् । विमानस्थलमै..
उपनिर्वाचनमा ५३७ मतदान केन्द्र, पुरुषभन्दा महिला मतदाता बढी
काठमाडौँ, २४ असोज । आगामी उपनिर्वाचनमा २४७ स्थलमा ५३७ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर १४ गते शनिबार सम्पन्न हुने उपनिर्वाचनका लागि ती मतदान केन्द्र तोकेको हो । बढीमा एक हजार एक सय मतदानका लागि एक मतदान केन्द्र रहनेगरी आयोगले मतदान केन्द्र निर्धारण..
महरा सांसदबाट पनि निलम्बित
काठमाडौँ, २४ असोज । यौन दुर्व्यहारको अभियोगमा हिरासतमा रहेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा सांसद पदबाट पनि निलम्बन भएका छन । बलात्कारको अभियोग लागेका महराको सांसद पद निलम्बन भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले महरा निलम्बनमा..
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपालको राजकीय भ्रमण २५ गते २३ आश्विन २०७६, बिहीबार ००:२५
काठमाडौँ, २२ असोज । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले यही असोज २५ र २६ गते नेपालको दुईदिवसीय राजकीय भ्रमण गर्नुहुने भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग राष्ट्रपति भण्डारीले भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको..
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट विशिष्ट महानुभावलाई टीका २१ आश्विन २०७६, मंगलवार २३:०३
काठमाडौँ, २१ असोज । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बडा दशैँका अवसरमा आज शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत विशिष्ट महानुभावलाई टीका लगाउनुभएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओली, उहाँकी धर्मपत्नी राधिका शाक्यसहित विशिष्ट महानुभावलाई टीका लगाउनुभएको हो..
सौराहामा रात्रिकालीन जीप सफारी
२ कार्तिक २०७६, शनिबार ११:४४
२ कार्तिक २०७६, शनिबार १०:४४
स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षा स्थगित
२ कार्तिक २०७६, शनिबार १०:३३
भूकम्प पीडितलाई कार्तिक मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता लिईसक्न प्राधिकरणको आग्रह
२ कार्तिक २०७६, शनिबार ०९:४५
पाँच जिल्लाका सिडिओ फेरिए (सूचीसहित)
काठमाडौँ, २ कार्तिक । सरकारले पाँच जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरको छ । शुक्रबार गृहमन्त्रालयले ५ जिल्लाका सिडिओको सरुवा..
उप निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक
काठमाडौँ, १ कार्तिक । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर १४ गते उप निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।..
सर्वोच्चले रोकिदियो स्थानीय जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता
काठमाडौँ, १ कार्तिक । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउँदै आएको तलब भत्ता रोकिदिएको छ । स्थानीय..
सरकारका निर्णयः हाइड्रोपावरलाई बन क्षेत्र दिनेदेखी रेडियो नेपाललाई पैसा उपलब्ध गराउनेसम्म
निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ३० असोज । सरकारले सार्वजनिक, सरकारी, गुठी जग्गा हिनामिनाबारे अध्ययन गर्न गठित समितिको..
कांग्रेसको प्रशिक्षण कार्तिक १ र २ गते
काठमाडौँ, ३० असोज । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आउँदो कात्तिक १ र २ गते..